Tian’i Myanmar Mba Hatsahatr’izao Tontolo Izao Ny Fampiasàna Ny Teny Hoe Rohingya Hanondroana Ireo Vondrom-poko Enjehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2016 15:35 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, 日本語, Español, عربي, Ελληνικά, English
Fiakarana anaty kamiao miaraka amin'ireo Rohingya mpitsoaponenana. Sary an'i Steve Gumaer. Loharano: Flickr, lisansa CC
Ho an'ireo mpiaro zon'olombelona any ivelan'i Myanmar, ny vahoaka Rohingya no isan'ireo iharan'ny fanenjehana indrindra eto an-tany. Saingy ho an'ireo manampahefana ao Maynmar sy ireo Bodista nasionalista, toy ny mpifindra monina tsy ara-dalàna no fomba itondràna azy ireny any amin'ny fanjakana andrefana ao Rakhine.
Mangataka amin'ireo governementa hafa ny minisitry ny raharaha ivelany ao Myanmar mba tsy hiditra amin'ny fampiasàna ny teny hoe Rohingya, satria raisina ho teny fanimbazimbàna izy io ho an'ireo olona marobe ao amin'ny fireneny.
Fa tamin'ny volana lasa, namoaka fanambaràna iray ny masoivoho Amerikana ao Myanmar nilazàny ny fiarahany miory amin'ny fianakavian'ireo Rohingya mpitsoa-ponenana an-tsambo izay maty trà-doza.
…manolotra fiarahana miory izahay ho amin'ireo fianakavian'ny trà-doza, izay ambaran'ny tatitra avy any an-toerana fa avy amin'ny vondrom-piarahamonina Rohingya. Mety hitondra ireo vondrom-piarahamonina hanao sorona ny ainy hikatsaka ny tsara kokoa ho amin'ny fiainany ny fameperana ny fidirana amin'ny tsena, ny zavatra ilainy andavanandro ary ireo tolotra filàna fototra hafa ao amin'ny fanjakàna Rakhine.
Nahatezitra ireo Bodista nasionalista io fanambaràna io, izay nikarakara hetsi-panoerana iray teo anoloan'ny masoivoho Amerikana. Nitondra sorabaventy izy ireo, nisy hafatra hoe “Fahavalonay ireo izay mampiasa ny teny hoe Rohingya!” sy hoe “Aza mitsabaka amin'ny raharahan-tokantranonay!”
Isisihan'izy ireo ny tokony hiantsoana ireo Rohingya hoe “Bengalis” satria “mpifindra monina tsy ara-dalàna avy any Bangladesh” izy ireny.
Manao hetsi-panoherana ao Mandalay ireo Nasionalista ao Mynamar hanoherana ny nampiasàn'ny Amerikàna ny teny hoe #Rohingya
Hetsi-panoherana nasionalista manakiana ny fanambaràna Amerikana momba ny Rohingya
Ny ankamaroan'ireo Rohingya dia Miozolmana nonina tany akaikin'ny sisintany iraisan'i Myanmar sy Bangladesh efa ho an-jato taona maro. Saingy nolavin'ny governemanta ao Myanmar ny hanaiky ireo Rohingya ho iray amin'ireo vondrom-poko ao amin'ny fireneny.
Hatramin'ny 2012, marobe ny fifandonana tamin'ireo Bodista mahery fihetsika ary nafindran'ireo vondrona Miozolmana hiala amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ny Rohingya. Ny sasany nandositra ho any amin'ireo firenena ao Azia Atsimo Atsinanana, ho toy ny mpitsoa-ponenana an-tsambokely, raha maro kosa ireo nandeha nialokaloka tany amin'ireo toby vonjimaika.
Raha nitodika tamin'ny Parlemantan'ny Angletera, nofaritan'ilay Kardinaly Katolika voalohany indrindra tao Myanmar, Charles Maung Bo, ho “isan'ireo vahoaka tena enjehana, atao an-jorom-bàla, tsy heverina ho olona eto ambonin'ny tany ireo Rohingya.”
Nitatitra ny fanambaràny ny tranonkala “World Watch Monitor” :
Ratsy noho ny fitondra biby no itondràna azy ireo. Noverezina ny zo maha-olompirenena azy, nahilik'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina, lasa tsy manana tany niaviana. Tsy misy olombelona mendrika ny ho entina amin'ny fomba tahàka izao.
Scot Marciel, ambasadaoro vaovaon'i Etazonia ao Myanmar, nanaiky ny toerana noraisin'ny governemanta ao Myanmar manoloana ny teny hoe Rohingya, saingy nanindry fa manana zo ireo vondrom-piarahamonina ny ho antsoina amin'ny anarany avy.
Niteraka fanehoankevitra masiaka tety anaty aterineto tao Myanmar ny fanambaràn'i Marciel, na teo aza ny hoe tsy nanaovan'ilay irak'i Etazonia fanamarihana ny teny Rohingya.
Ny Irrawaddy, tranonkalam-baovao iray mahaleotena, dia namoaka matoandahatsoratra iray momba ilay lohahevitra.
Tsy nidirany ny adihevitra momba izay fomba fiantso any, niantso fifanakalozankevitra izy eo amin'ireo Bodista sy Miozolmana :
…Aleo tsy ny resaka fiantsoana no ifandaharana, fa fifanakalozankevitra eo amin'ireo Bodista maro an'isa sy ireo Miozolmana vitsy an'isa no hatomboka ao amin'ny fanjakàna Arakan, ary hikatsaka vahaolana iray maharitra, izay mety hampihena ny fijaliana isanandron'ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ilay firenena ianjadian'ny fahantràna.